प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा : अब कहिले आउँछ फैसला ? – NawalpurTimes.com
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा : अब कहिले आउँछ फैसला ?
प्रकाशित : २०७७ फागुन ८ गते ९:३५
काठमाडौं, ८ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको पक्ष–विपक्षमा शुक्रबारदेखि बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार र निवेदकका वकिललाई फागुन १० गतेभित्र ‘बहस नोट’ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पक्ष/विपक्षको बहस सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा बाँकी विषय इजलासले तय गरेको प्रक्रियाबमोजिम हुने बताए। बहस नोट पेस भएपछि निर्णय सुनाउनका लागि दिन तय हुनेछ। त्यसअघि सर्वोच्चका पूर्वनजिर, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, संविधानका व्यवस्था, कानुन व्यवसायीका दाबी, तथ्य, आधार, प्रमाण सबै पक्षलाई केलाएर फैसला ‘ड्राफ्ट’को कार्य हुनेछ। त्यसपछि सर्वसम्मत रायका आधारमा वा मतैक्य हुन नसकेको स्थितिमा बहुमतका आधारमा विघटन विवादको टुंगोमा पुगिनेछ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।